Ndakaishwetedza ndokutanga kukazvambura nyoro, kakazvitundira nekunakirwa! - Nhau Dzevakuru
Ndakainangisa mboro ndokubva ndaisa musoro chete wanikwe ndeee ndee ndiye shweee, yapinda yese wena, iko ndokutotanga kukoira, Ahh iwe masasi, kakandibata muchiuno umu, ndokubva katangana nacho chikapa, ndakainyudza yese ndokutanga kukazvambura nayo mboro.
Kakandibatirira wena apa ndainge ndakubaya baya tumwe tunyama hameno kuti ndingati chibereko here am not even sure kuti nesize yake anga atova nacho here. Beche rainge rakakura iroro nezera rake, asi rainaka zvekuti ndaishaiwa kuti zvirikumbofamba sei?Kakakoirira kamwana zvino ndakanzwa kakuti imi kani imi kani ndokutanga kutobudisa musodzi, ndikati hekani waro, ndakakamutsa ndobva ndakafongoresa ndakakabatisa mubhedha.
Ndakaishwetedza ndokutanga kukazvambura nayo mboro again, ndakakabata kudaro ndakaona kaishaya kuti kobata pai nekunakirwa, ndirimubishi rekukoira ndakanzwa zvino kakusunga beche ndobva ranzi mbaaa, ndokuramba rakabata mboro yangu zvekuti grip racho ranga ranyanyisa, mbuuuuyaaa, vateteeeee kani amamii, kakadaro kachirova mubhedha nemaoko kachinamirira pamasheets angu kachitunda.
Pakaida kuti karare nedumbu ndakakasimudzira futi mudenga kuti kakombame, ndokukazhaka zvekuti zvino kanga kangonyarara kakungoshinyira chete, ndakatsunzunya manje ndakunyatsoterera beche ndichikoira chete, iko simba ranga rapera nekutunda kanga kasisakoiri back, kanga kangokombama manje apa beche rakanatsonuna ririkumashure, zvekuti kamwana kechikoro zvakambondibuda ipapo.
Ndakakabata mafudzi kuti mboro inatsopinda yese mushure mekanguva kekukoira, ndakazwa hurume hwanga hwaakuuya zvinemusindo, ende futi ndakanzwa mutsindo, ndichirova beche sebeche, remhando chaiyo.
Thanks for reading – Comments are welcome, let us know if you want PART 2
Ndakangomuti ndirikuda kuiswawo ndawona kukura kwechombo chake!
Previous articleNdakaiswa ndakanyatsovhura makumbo apa achiyamwa matits angu!
Next articleNdakainyudza yekedero ndokubva ayibata akanangisa paburi rechinhu chake!